Fandraisana - Royal Beach Hôtel
HETSIKA MANOKANA SY FANDRAISANA
FANATANJAHATENA SY HETSIKA MARO SAMIHAFA
HOTELY ANISAN'NY RAITRA INDRINDRA ETO NOSY BE
Ny Royal Beach Hôtel & Spa Nosy Be dia miorina eo atsimo-andrefan'ny « île aux parfums » , eo amoron-dranomasina any amin'ny moron-tsirak'i Madirokely, etsy andaniny, mandeha an-tongotra dimy minitra avy eo amin'ny tanàna mahafinaritra Ambatoloaka.
Ny Royal Beach Hôtel & Spa Nosy Be dia manana trano fisakafoana roa izay ahitanao ny vokatra avy eo @ faritra manditry ny fivahinihananao. Ao @ trano fisakafoana lehibe “Le Nautile” ao @ rihana voalohany, izay mahazaka sakafo 150 no aroso ny sakafo maraina, ny sakafo antoandro ary ny sakafo hariva à endrika “buffet”. Ny trano fisakafoana faharoa “Côté Jardin” manoloana ny dobo filomanosana ary ao @faritry ny jaridaina, izay azo jifaina @ alalan’ny famandrihana sy arakaraky ny hetsika karakaraina. Ny “Louange bar” sy ny “Pool bar”, samy manana ny mampiavaka azy, dia atolotra anao ho amin’ny fotoana fakana aina sy fialam-boly. Ny karatry ny zava-pisotro oman’ny barmen-nay dia hampitolagaga anao amin’ireo tsakitsaky miavaka.
Fantanjahantena sy fialamboly isan-karazany
Ho an’ireo mankafy fanatanjahan-tena dia manana toerana natokana ho amin’izany izahay. Eo ihany koa ny toeram-pilomanosana maro afahanao manatanteraka ny fanatanjahan-tena tianao amin’ny toerana tsy manam-paharoa. Misy toerana filalaovana ihany koa hoan’ny rehetra ary miaraka amin’ny mpanentana: manana latabatra biara iray sy ana-tenisin-databatra iray, efitra filalaovana “jeu”. Misy fanentanana maro samihafa omanina ho an’ireo mpivahiny ato aminay.
Mandritra ny fotoana ivahiniananao, ny "RAVINALA SPA" dia misokatra ho anao amin’ny 07 ora sasany maraina hatramin’ny 11h ora alina. Ho hitanao ao ireo karazana fanorana miaro hanitra, fikarakarana sy fitsaboana ary koa ny "Jacuzzi", ny "Sauna" sy ny "Hammam" mba ho lafatra ny fialantsasatrao. Ho an’ireo vahiny mpankafy ny fanatanjahantena, misy ihany koa ny toerana fikotranana na ny efitra fanaovana "fitness", ny tokontany lehibe filalaovana tennis, basket-ball ary beach volley miaraka amin’ireo fitaovana rehetra ilaina ho amin’izany.
Ny Royal Beach Hôtel & Spa Nosy Be dia mety tsara amin'ny fihaonana,seminera, dinika, mariazy sy lanonana ara-pianakaviana. Malalaka tsara amin'ny velarana 170 m2 ary mifanaraka tsara @ ireo hetsika goavana, nyefitranonay fanaovana dinika izay misy "climatiseur" dia afaka mandray olona hatramin'ny 120 raha resaka tsakitsaky ary 75 raha fandefasana sarimihetsika. Manana fitaovana momba ny haino aman-jery izy. Arakaraky ny hetsika, misy sakafo antoandro, sakafo hariva sy/na kafe afaka karakaraina. Ho filaminanao, misy toerana fiantsonana fiarakodia milamina tsara ihany koa ao.
An-tanety sy an-dranomasina, ny Royal Beach Hôtel & Spa Nosy Be, miaraka @ireo ekipa misahana ny fitsangatsanganana dia mitondra anao ho amin'ny tontolon'ny "aventure" izay ahitanao ny nofinofy sy ny tena izy. Ny asa Fanentanana ataonay dia manolotra anao/anreo ny karazana fitsangatsangana rehetra, na izany an-tanety (fitetezana ny nosy, famakivakiana ny natiora, famantarana ireo fomba amam-panao) amin'ny alalan'ny fiarakodia, na an-dranomasina (fitsidihana ny manodidina, lomano, fandehanana @ botry na "voilier"). Tsy diso anjara ny olona mpankafy fanatanjahantena, afaka mitaingina quad izy, milomano an-dranomasina, manjono. Izahay dia manolotra anao safidy maro ana "activités" sy "sorties" mba hamantatra an'i Nosy Be sy ny manodidina azy.